June 13, 2021 - Online Hartha
အွန်လိုင်းပေါ်ဟုန်းဟုန်းထသွားတဲ့“ ရဲမေလေးရဲ့ ”အား…ဗိုလ်ကြီးနာတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို ရုပ်သံ
June 13, 2021 by Online Hartha
ရဲမေလေးရဲ့ အား ဗိုလ်ကြီးနာတယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ရဲမေလေးရဲ့ အားဗိုလ်ကြီးနာတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်လို့ တောင်ပြောလို့ ရပါတယ်တယ် ရဲမေခမျာ ဘယ်လောက်တောင်နာလိုက်မလဲ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစား သာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ လက်ဖျား လက်နား တံခါးညှပ်တယ်ဆိုတာ ဘာများ လဲဆိုပြီး ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ဟာသ သက်သက် ရယ်မောစေရန် တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ အတွက် သီလ လုံခြုံစွာ မဆဲမဆိုပဲ အသက်လဲရှည် ရယ်မောရုံ သက်သက်လေးသာ ဟဟ ပေးသွားကြပါဗျာ ဆဲတယ်ဆိုတာ ကြားတဲ့သူလဲ မကောင်း ဆဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အတွက်လဲ အမြင်မတင့်တယ်ပါဘူး သိတယ်မလား ရယ်မောခြင်းခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာပင်ပန်းမှု့တေ ပြေပျောက်ကြပါစေ….။ #လူတင် Unicode Version ရဲမလေေးရဲ့ အား ဗိုလျကွီးနာတယျဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ ရဲမလေေးရဲ့ အားဗိုလျကွီးနာတယျဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျ အောကျဆုံးတှငျပါဝငျသညျ မထငျမှတျဘဲဖွဈတဲ့အဖွဈအပကျြလို … Read more
ငါ့သားများအိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရင်လေ အမေ ဒါတွေမှာချင်တယ်
အမေကိုချစ်တဲ့သားဟာ မယားမချစ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါ့သား အမေနဲ့မိသားစုကိုလဲချစ်ပါ မိခင်မျိုးနွယ်ဝင်ဇနီးသည်ကိုလဲချစ်ပါ..အမေ့အတွက်သားကောင်း အစ်မညီမအတွက် မောင်ကောင်း၊ အစ်ကိုကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဇနီးသည်ကို မကောင်းဘူး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေနဲ့ကွဲ့ မိသားစုကိုချစ်သလို ဇနီးသည်ကိုချစ်ပေးပါ….. မိဘအိမ် မောင်နှမအိမ် ဇနီးသည် မသိဘဲမသွားနဲ့ငါ့သား သူတို့မိသားစုတွေ ငါ့ကွယ်ရာ ငါ့ယောက်ျားကိုဘာသွေးထိုးနေပါလိမ့်လို့ သူ့ဖက်ကအမြင်မျိုးဖြစ်စေတတ်လို့ တတ်နိုင်ရင် ငါ့သားမိသားစုဆီသွားရင် ဇနီးကိုခေါ်သွားကွဲ့ မလိုက်တာတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ ခေါ်ပါရဲ့နဲ့မလိုက်ပဲ စကားနာထိုးတာ သွေးထိုးတာလဲလက်မခံနဲ့ငါ့သား မိသားစုနဲ့ဇနီးသည်ကြား သမာသမတ်ကျကျ မျှမျှတတဖြစ်ပါစေ…။ ငါ့လုပ်စာပဲ ငါ့မိဘ မောင်နှမ ပေးတာ မိန်းမပြောစရာမလိုဘူး မထင်နဲ့ငါ့သား အမှားကြီးမှားမယ် အမေကမွေး အမေပြုစုယုယပေးပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျရင်အမေ မပိုင်ဘူး ငါ့သားလေးရဲ့…. မိန်းမ မသိအောင်ခိုးပေးခြင်းဟာ အမေ့သိက္ခာထိခိုက်သလို ချွေးမ အနေနဲ့ကြည့်ရင် သူ့မာန ထိခိုက်စေတယ် ငါ့သားလေးရဲ့.. မိန်းမရေ ဒီလောက် ဒီမျှတော့ မိဘတွေကန်တော့ရအောင်ကွာ … Read more
ခေါင်းကိုက်လို့ ပါရာတောင်းသောက်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး
ခေါင်းကိုက်လို့ ပါရာတောင်းသောက်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့(၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး News.AU မှ ဖော်ပြချက်အရ အသက်၂၁နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်လေး တစ်ဦးမှာ ခေါင်းကိုက်ကိုက်နဲ့ ညအိပ်ယာဝင်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက် မှာတော့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် ဆိုပြီးဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုးကားဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ UK, Gateshead မှာ မိခင်နဲ့ အတူတူနေထိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး Jessica Cain ပါ။သူမဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက ရုတ်တရက် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ မသေဆုံးခင်ညတုန်းက Jessica ဟာ မိခင်ကိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ပါရာစီတမောတောင်းသောက်ကာ အိပ်ယာစောစောဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ မိခင်ဖြစ်သူက သမီးလေး သက်သာလားမေးမလို့ သွားနှိုးခဲ့ပေမယ့် Jessica ပြန်မထူးခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်လောက် … Read more
အသက်ကြီးလို့ ဗိုက်ကြီးပူလာခြင်းကို မပူပါနဲ့ သက်ရင်းကြီးမြစ်နဲ့ဒီလိုရှင်းလို့ရတယ်
အသက်ကြီးလို့ ဗိုက်ကြီးပူလာခြင်းကို မပူပါနဲ့။ သက်ရင်းကြီးမြစ်နဲ့ ဒီလိုရှင်းလို့ရတယ် အသက်ကြီးလာလျှင် ယောက်ျား မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ဗိုက်ကြီးပူလာခြင်းမှာ သဘာဝဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အဆီများ၍ ပူလာသောဗိုက်ကို သရင်းကြီးမြစ်နှင့် စမ်းသပ်လိုက်ပါ။ သက်ရင်းကြီးမြစ်ကို လေးလက်မ ငါးလက်မခန့်ဖြတ်၍ ရေစင်စင်ဆေးပါ။ ဘက်တီးရီးယား ပိုးများသေစေရန်နှင့် မှိုများ မကျရောက်စေရန် အမြစ်များကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး ပေါင်းပါ။ သုံးနာရီပေါင်းပြီးမှ ခြောက်သွေ့စေရန် နေလှန်းပါ။ဆေးသွေးကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာ သွေးပြီး သောက်ပါ။ ၁၀-ရက်လောက် သောက်ပြီးနောက် ပူနေသောဗိုက်ကြီး တနေ့တခြား ပိန်သွားပါလိမ့်မည်။ အဆီရှိသောနေရာ ပိန်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူပိန်သွားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဆေးသောက်နည်း နေ့စဉ် နံနက်စောစော (၆)နာရီမှာဖြစ်စေ၊ (၇)နာရီမှာဖြစ်စေ နံနက်စာ (Break Fast) မစားမီဆေးကိုသွေးပြီး သောက်ပါ။ တစ်ကြိမ်ပဲ သောက်ပါ။ (Zebra) စတီးဇွန်းဖြင့် ဆေးရည်ကို … Read more
ယောကျြားတှကေ အပွုအစုကောငျးတဲ့ မိနျးမမြိုးရှာဖှယေူရငျ ဇနီးမယားယူတာလား၊ကြှနျဝယျတာလား
ယောက်ျားတွေက အပြုအစုကောင်းတဲ့ မိန်းမမျိုးရှာဖွေ ယူရင် မယား ယူတာလား ? ကျွန်ဝယ်တာလား? တချို့က မေးကြတယ်လို့ ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် အိမ်ကပေးစားတာမဟုတ်ဘူး ချစ်လို့ယူထားတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်သူ့မှာရှိတယ် တစ်နှစ်ကျော်‌လောက်ပေါင်းပြီး ဒီကောင် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဇယားကပ်ရော …။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကမျိုးစောင့် ဥပဒေတွေဘာတွေ မပြဌာန်းခင် လွန်ခဲ့တဲ့ 3နှစ်လောက်အရင်ကပေါ့ မိန်းမကသိတော့တငိုငိုတရီရီနဲ့ကွာရှင်းမယ်မပေါင်းဘူးလုပ်ရော၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင် သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကပါ ဒီကောင့်ကို ရွံပြီးလုံးဝလက်မခံတော့ အဲဒီမယား အငယ်လေးနဲ့ တခြားမြို့မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီးနေတယ် …။သူ့ပထမမိန်းမက ရိုးရိုးအေးအေး စက်ဆရာမ ကောင်မလေးက အလှကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ချစ်စရာလေး၊ နောက်ယူ လိုက်တဲ့ မယားငယ်က KTVက ကောင်မလေး ၊သူ့ပထမမယားရဲ့ခြေဖျားမမီဘူး …။ကိုယ်လဲသိသိချင်းက ဒီကောင့်ကိုရွံပြီးစကားမပြောဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး 2နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့ မန်းလေးသွားရင်း တစ်ရက်ဈေးချိုထဲမှာအမှတ် မထင် ဒီကောင်နဲ့ပက်ပင်း သွားတိုးတယ်။ … Read more
မဲညဈနတေဲ့ ခြိုငျးကွား၊ ပေါငျခွံ၊ တံတောငျဆဈတှကေို အမွနျဆုံးဖွူဝငျးသှားစမေယျ့ နညျးလမျးမြား
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ… ပျိုမေတို့အနေနဲအတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေမဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့အပြင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်;လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေမှာပါနော် …။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်” လတ်ဆတ်တဲ့ရှားစောင်းလက်ပပ်အနှစ်ကိုယူပြီး မည်းနေတဲ့ တံတောင်ဆစ်၊ ဒူးခေါင်း နဲ့ ပေါင်ခြံတွေအပြင် တခြားမဲနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လိမ်းပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေနွေးလေးနဲ့ ပြန်လည်ဆေးကြောပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်ကို ချက်ချင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ …။ (၂) ဒိန်ချဉ်” ဒိန်ချဉ်အသန့်ကိုယူပြီး မည်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လိမ်းပေးပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောပေးလိုက် ရုံပါပဲ …။ … Read more
အကယျဒမီခြိုပွုံး ကိုယျတိုငျ ခံစားရတဲ့ဝဒေနာပြောကျလို့ ပွနျလညျမြှဝထေားတဲ့ ဆေးအိုးပုပျပငျ အစှမျး
အကယ်ဒမီချိုပြုံး ကိုယ်တိုင် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာ ပျောက်လို့ ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့ ဆေးအိုး ပုပ်ပင်အစွမ်း အံ့မခန်း ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများ လျှာကင်ဆာ ပါးစပ်အတွင်းအပူနာ လည်းပင်းကင်ဆာ သွားပိုးစား သွားကိုက် သွားနာ မဲ့ခရု ပါးစပ်အတွင်း ရေယုံစတဲ့ ခံတွင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း သက်သာစေသည်။ နွယ်မြက် သစ်ပင် ဆေးဖတ်ဝင်ဆိုသော ရှေးလူကြီး များ၏ ဆိုရိုးအတိုင်း ယခုပုံပါ ခရမ်းရောင်ပွင့်ပါ ဆေးအိုးပုတ်ပင်သည် အင်မတန်မှ အစွမ်းထက်လှသော ဆေးပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပေသည်။ ပျောက်ကင်းသော ရောဂါဝေဒနာများမှာ အထက်က တင်ပြထားသော ရောဂါဝေဒနာများအား ဆေးဖိုး အကုန်အကျခံ ခွဲစိတ်စရာမလိုပဲ ၃-၄ ကြိမ်ခန့် အသုံးပြုရုံဖြင့် ယူပစ်သလို ပြောက်ကင်းနိုင်သော အံ့မခန်း ဆေးပင် တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုပုံ ၁။ ဆေးအိုးပုတ်ပင်၏ … Read more
အတွေ့အကြုံသစ်တွေလိုချင်တဲ့ မနူးမနပ်ကောင်လေးနဲ့တွေ့ခဲ့သော ညငှက်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲစရာအဖြစ်
အတွေ့အကြုံသစ်တွေ လိုချင်တဲ့ မနူးမနပ် ကောင်လေးနဲ့ တွေ့ခဲ့သော ည ငှက်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်လေးပါ အသက်က ၁၇နှစ် သူငယ်ချင်းတွေကလူပျိုရည်မပျက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုဂိုဏ်းဝင်သွားအောင် မင်္ဂလာဈေးJJအောက်မှာ ညမွှေးပန်းသွားရှာမယ်လိုက်ခဲ့ ..ဆိုတာနဲ့ လူငယ်ဆိုတော့စူးစမ်းချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လိုက်သွားခဲ့တယ်။ ဟိုရောက်တော့ .. သားကြီး မင်းက ဒီညအထူးဆိုတော့ ..မင်းတစ်ယောက်ရွေးကွာတဲ့သူတို့ကသူတို့ စိတ်ကြိုက်တစ်ယောက်ရွေးတယ်..အဲဒီမှာ ဝိုင်းဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တယ်။ရှေ့မှာလာရပ်ပြနေတဲ့ ကောင်မလေးတွေထက် ..ဟိုးးး သစ်ပင်အောက်မှာတစ်ယောက်တည်းငူငူငေါင်ငေါင်ထိုင်နေတဲ့ သူမဆီ ..ကျွန်တော် အသာလျှောက်သွားတယ်..။ မီးမလင်းတလင်းမှာ ..မပီဝိုးတဝါးဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော့်အထင်မျက်ရည်တွေများ ဝိုင်းနေသလား မသိပါဘူး..မင်းနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ..ဝိုင်းတဲ့ .. နာမည်မေးတုန်းရှိသေးတယ်။ခေါင်းဆိုတဲ့ လူ ရောက်လာပြီးညီက ဒီကလေးမလေးကြိုက်လို့လားတဲ့ …ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အသာညိတ်မိလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်..ကဲ ..မိဝိုင်း ထတော့ အလုပ်ပေါ်ပြီ နင်စိတ်ညစ်တာနောက်မှညစ်.. လိုက်သွား .ခေါင်းရဲ့ စကားအဆုံးမှာ … Read more
ရုတျတရကျ ကွားလိုကျရတာတော့ ရညျးစားထားတာ ယူဖို့လားဆိုတာ နှာခေါငျးရှုံ့ခငျြစရာပါပဲ
ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတာတော့ “ရည်းစားထားတာ ယူဖို့လား” ဆိုတာ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်စရာပါပဲ… မြန်မာ့ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကြောင့်ရယ်၊ ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ရယ်တော့ “ရည်းစားထားတာ ယူဖို့လား” ဆိုတာ နှာခေါင်းရှုံ့ချင်စရာပါပဲ .. အရှေ့တိုင်းမှာ (အထူးသဖြင့်) မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လို့ ရည်းစားထားပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီရည်းစားကို အတိအကျ ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့တာပါပဲ .။ ကိုယ်တိုင်ဝတ်မဲ့ အကျီင်္တစ်ထည်၊ လုံချည်တစ်ထည်၊ ဖိနပ်တစ်ရံကိုတောင် သေသေချာချာ ရွေးကြချယ်ကြ၊ ကိုယ်နဲ့ လိုက်မလိုက်၊ တော်မတော်၊ သင့်မသင့်၊ ဈေးနှုန်းအနေအထား၊ ဝတ်ရမဲ့အချိန်အခါ အများကြီး တွက်ချက်ပြီးမှ ဝယ်ကြတာ မဟုတ်လား ..။ တစ်ဘဝလုံး မဟုတ်တောင် ကိုယ်နဲ့ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် (အထူးသဖြင့်) ကိုယ် မွေးပေးလိုက်ရမဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ ဖခင်ဖြစ်မဲ့သူကို ဖိနပ်တစ်ရံ ရွေးသလောက်၊ လုံချည်တစ်ထည်ရွေးသလောက် ရွေးခဲ့ကြရဲ့လား … Read more
အနာရှိလြှငျ အရကျပြံထိတော့ စပျကွမှာပဲ
သင့်ဇနီး ဆိုတာ… သင့်ဇနီး​နေရာမှာ သင့်အမေ၊သင့် အမ ၊သင့်နှမသာဆိုလျှင်​ဘယ်လိုနေမလဲ? သူသည်လည်းပဲ မိန်းမထဲကမိန်းမ တစ်ယောက်ပါ ။ အသွေးနဲ့အသားနဲ့တည်​​ဆောက်​ထားတဲ့လူပါ ။ သက်မဲ့ အရုပ်တစ်ရုပ် မဟုတ်ပါ… သင့် အမေဖြစ်​တဲ့ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်​ပါ။ သင့်နှမဖြစ်​တဲ့ နှမချင်းကိုယ်​ချင်း​စာကြည့်​ပါ။ စိတ်တိုုလျှင်​ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတစ်​ခုနဲ့ သွယ်ဝိုက်မပြောနဲ့ …. သင်​​တောင်​မှ သင့်​အသားထိလျှင်​ နာတက်​​သေးတာပဲ… ဝဋ်​ဆိုတာ မလည်​ဘူးမထင်​နဲ့….ခံရတဲ့အခါ ပြုံးနိုင်​ကြိုးစားပါ။ တချိန်မှာ သင့်ညီမဟာလည်း သူများရဲ့ သားမယားဖြစ်​နိုင်သလို၊ သင့်သမီးကလည်း​ သူများသားမယားဖြစ်နိုင်တယ်​။ လူစိတ်​ရှိတဲ့​ယောက်ျားတစ်​​ယောက်​၊ လူလိုသိတက်​တဲ့ခင်​ပွန်း​ကောင်းတစ်​​ယောက်​က အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်​၊ အားနွဲ့တဲ့ ဇနီးတစ်​​ယောက်​အ​ပေါ် ဘယ့်​​တော့​မှ ကိုယ်​ထိလက်​​ရောက်​ မ​စော်​ကားဘူး၊ အနိုင်​မကျင့်​ဘူး… အဲ့ဒီလိုလုပ်​ရပ်မျိုးကို လုပ်တဲ့သူက​​ အ​တွေးအ​ခေါ် သိမ်​ဖျင်းတဲ့​ယောက်ျားညံ့၊ ​ယောက်ျားယုတ်​​တွေရဲ့ လုပ်ရပ်သာ​ဖြစ်တယ်​။ အနာရှိလျှင်​ အရပ်​ပျံ … Read more